Doorashada Kursiga Hop103 ee uu ku fadhiyay Guddoomiye Jawaari oo la hakiyey | Dayniile.com
Home Warkii Doorashada Kursiga Hop103 ee uu ku fadhiyay Guddoomiye Jawaari oo la hakiyey
Doorashada Kursiga Hop103 ee uu ku fadhiyay Guddoomiye Jawaari oo la hakiyey
Guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa go’aan xasaasi ah kasoo saaray muranka ka taagan kursiga uu horay ugu fadhiyey guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ee HOP#103.
Warqad kasoo baxday xafiiska guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in cabasho ay ka timid Jawaari, taas oo la xiriirta habraaca loo maray diiwaan-gelinta kursigaasi.
Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in shir ay ka yeesheen arrintan, kadibna la’isku raacay in la hakiyo doorashada kursigan, illaa iyo inta laga xalinayo tabashada ka jira.
Guddiga ayaa sidoo kale faray guddiga doorashada Koonfur Galbeed inuu dhaqan-geliyo go’aankan, isla-markaana uu joojiyo qabashada doorashada kursiga HOP#103.
Go’aanka guddiga ayaa kusoo aadayo kadib markii Jawaari oo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed u tagay tartanka doorashada uu sheegay in laga hor istaagay musharaxnimadiisa, meeshana ay ka jirin doorasho daah-furan.
“Caqabado iyo culeys ayaa naga horyimid, arrimaha meesha ka socda (Baydhabo) aniga shaqsiyan marka qiyaasay meeshan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax kasoo doontay oday meeshan ma taallo. Waxaa socda arrimo tagri-fal caadi ah,” ayuu yiri Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka
Previous articleGuddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa markale loo doortay xildhibaan BFS
Next articleMadaxtooyada Soomaaliya oo loo Magacaabay Agaasime cusub
In India, a stampede killed 12 people at a holy temple.
axmed shiikh - January 1, 2022 0
Officials in Indian-administered Kashmir reported at least 12 people died and 13 were injured in a stampede at a religious site early Saturday. On condition...
Maamulka DDS oo xiray Xarunta Telefeshin ay leedahay Gabar Soomaali ah
Manchester City now leads by 11 points, but Tottenham is closing...
Kumannaan dibadbaxayaal ah oo hor tuban madaxtooyada Suudaan
The Taliban will not allow Daesh to establish a base in...
FIVERR Sidee Lacag Looga Sameeyaa? Lacag malaga Sameyn karaa?
Somaliland oo ku hanjabtay inay xiri doonto Xarunta Universal TV Hargeysa
War deg deg ah: Xaalada magaalada Boosaaso oo caawa kacsan iyo...
axmed shiikh - December 8, 2021 0